Alshabaab oo sheegtay masuuliyadda dad saaka lagu laayey Woqooyo Bari Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: War rasmi ah oo kasoo baxay xarakada Alshabaab ayaa ururkaasi ku shegtay mas’uuliyadda weerarkii dadka badan lagu dilay ee saaka ka dhacay duleedka degmada Mandheera ee gobolka Woqooyi Bari Kenya.
Warsaxaafadeed uu ku saxiixnaa Afhayeenka Alshabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa lagu sheegay in Alshabaab ay fuliyeen weerarkaas, islamarkaana ku dileen dad badan Kirishtan ah.
Warka Alshabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi ahaa mid loogu aar gudayey Muslimiinta dhulka xeebaha ee Kenya iyo Muslimiinta Soomaaliya.
Alshabaab ayaa ku eedeeyey Kenya iney mar kasta xasuuq kula kacdo Muslimiinta Kenya iyo Soomaaliya, waxaana weerarka Alshabaab ee dhiiga badan ku daatay kusoo beegmay xilli todobaadkii hore ciidamada Kenya ay magaalada Mombasa ku dileen dadk ku jiray masaajidyo.
Weerarkii saaka ka dhacay Tuulada Carabiya ee ilaa 35 KM u jirta Mandheera ayaa la sheegay in raggii fuliyey ay kala sooceen dadka Muslimiinta ah iyo kuwa Kirishtaanka ah, islamarkaana dileen dadkii gaalada ahaa.